Home » Rail njem » Na Napa Valley Wine Train na-emegheghachi na May 17
Otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè ole na ole na-arụsi ọrụ ike na United States, ahụmahụ mmanya mmanya mara mma na-agba ume imeghe ya.
Na Napa Valley Wine Train na-ekwuwapụta na ọ ga-anabata ndị njem mbido Mọnde
Napa Valley Wine Train na-ezube ịmaliteghachi na otu n'ime njem ya kachasị eme njem, Njem Nleta Ahụ
A gwara ndị ọbịa ka ha yi ihe nkpuchi n’oge ha na-eme njem belụsọ mgbe ha na-eri nri ma ọ bụ na-a drinkingụ
The Napa Ndagwurugwu Wine Train, ahụmịhe na echefu echefu nke na-ekwughachi ụbọchị otuto nke njem ụgbọ oloko, nwere obi ụtọ ịkpọsa na ọ ga-anabata ndị njem mbido Mọnde, Mee 17. Otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè ole na ole na-arụsi ọrụ ike na US, akara ngosi mmanya mmanya obodo ahụ mee ememe imeghe ya site n'inye ndi oru nlekọta ahuike ka ha kelee ha maka oru ha. Napa Napa Wine na-esonyere OLE Health ka ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi nwa oge na ọdụ ụgbọ oloko ha kemgbe etiti Eprel iji kwado mbọ ndị obodo na ịgba ọgwụ mgbochi obodo.
"Anyị dị mpako karịa ka anyị so na mpaghara ndagwurugwu Napa mgbe anyị hụrụ nnabata ya na ọrịa a niile ma chọọ igosipụta ekele anyị maka ndị dike ahụike mpaghara anyị," ka Steven Lampkin, onye ndu mpaghara Noble House Hotels & Resorts kwuru. "Anyị nwere obi ụtọ iweghachi ọmarịcha ahụmịhe anyị nwere maka ndị obodo na ndị ọbịa ma mejuputa ọtụtụ usoro nchekwa iji nye ndị njem udo nke uche mgbe ha na-anụ Wine Train nke ụwa na iri nri mara mma."
Napa Valley Wine Train na-ezube ịmaliteghachi na otu n'ime njem ya kachasị eme njem, Njem Nleta Ahụ. Njem Nleta ahụ malitere site na ịnụ ụtọ mmanya na-egbu egbu, na-esochi njem njem elekere atọ nke ndagwurugwu Napa a ma ama, nri nri nri anọ nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ Wine Train, na-akwụsị na akara ngosi ndagwurugwu Napa maka foto. ohere na nanị tastings na njegharị na Charles Krug na V. Sattui. Winegbọ njem mmanya mmanya zuru oke nke njem gụnyere Gourmet Express, Vista Dome, Grgich Hills Winery Tour na Murder Mystery Tour ga-amalite ịnabata ndị ọbịa n'etiti etiti June. Njem ọ bụla na-eme ka ndị njem nwee ọhụhụ na-agaghị echefu echefu nke ọtụtụ ubi vaịn na ebe a na-eche nche na ndagwurugwu Napa Valley, ọrụ iri nri dị mma na nri nri ọtụtụ na-atọ ụtọ ka ị na-atụrụ ndụ n'ụgbọ oloko ochie nke eweghachiri azụ.
Na Napa Valley Wine Train kere gburugburu ebe nchekwa na ịdị ọcha na usoro nchekwa ọhụụ maka ndị otu na ndị njem. Akwụsịla ọdụ ụgbọ okporo ígwè ọdịnala, tebụl dịkwa ụkwụ isii ugbu a na nkewapụrụ n'ime nkewawawa nkewa. Na mgbakwunye, ndị njem niile na ndị ọrụ ga-eyi mkpuchi ihu ka ha banye n'ụgbọ okporo ígwè, a gwara ndị ọbịa ka ha eyi ihe nkpuchi n'oge njem ha belụsọ mgbe ha na-eri nri ma ọ bụ na-a drinkingụ.